Muzhizha ra 2009, mafoni ehurumende akanga achinyengetera munyika yose yeRwanda. Mukuwedzera kune mamiriyoni emafoni kubva kumhuri, shamwari, uye shamwari dzebhizimisi, vanenge 1 000 vaRwanda vakagamuchira runhare kubva kuna Joshua Blumenstock nevamwe vake. Ava vatsvakurudzi vakanga vachidzidza upfumi nehurombo kuburikidza nekuongorora shanduro yevanhu vasina kubva kune imwe nzvimbo yepa database yevashandi ve mamiriyoni 1.5 eRwanda mufoni huru yepafoni. Blumenstock uye vashandi vakabvunza vanhu vakasarudzwa vakasarudzwa kana vachida kubatanidzwa muongororo, vakatsanangura chimiro chekutsvakurudza kwavari, uye vakakumbira mutsva wemibvunzo pamusoro pehuwandu hwevanhu, hupfumi, uye hupfumi.
Zvose zvandakambotaura kusvikira zvino zvinonzwika semasayendisiti ekuongorora svesayenzi. Asi izvo zvinouya zvinotevera hazvisi tsika-zvishoma kwete. Mukuwedzera kune dheta rekuongorora, Blumenstock uye vashandi pamwe chete vakave nemafuta akakwana mazita evanhu vane mamiriyoni 1,5. Kubatanidza zvinhu izvi zviviri zvemashoko, vakashandisa nhamba yekutsvakurudza kuti vadzidzise mhando yekudzidza mitemo kufanotaura upfumi hwomunhu hunobva pane zvinyorwa zvadzo. Zvadaro, vakashandisa muenzaniso uyu kuti vaenzanise pfuma yevamwe vatengi vemamiriyoni 1,5 vari mu database. Vakatarisawo nzvimbo dzekugara kwemamiriyoni 1,5 vatengi vachishandisa nharaunda yemashoko akabatanidzwa mune zvinyorwa zvese. Kuisa zvinhu zvose pamwe-fuma inofungidzirwa uye nzvimbo inofungidzirwa yekugara-vakakwanisa kubudisa mapepa akakwirira-siyana ekuparidzirwa kwehupfumi muRwanda. Kunyanya, vanogona kubudisa pfuma inofungidzirwa yega yega yeRwanda 2 148 masero, chiduku chiduku chekutungamirira munyika.
Zvinosuruvarisa, zvakanga zvisingabviri kugutsikana nekururama kwezviyero izvi nokuti hakuna munhu akambotanga kuongororwa kwezvinhu zviduku zvakadai muRwanda. Asi apo Blumenstock nevamwe vavo vakaunganidza maonero avo kumatunhu makumi matatu eRwanda, vakaona kuti maonero avo akanga akaenzana nekuenzanisa kubva kuDemographic uye Health Survey, iyo inowanzoonekwa seyoyo yegoridhe yemayero munyika dzinosimudzira. Kunyange zvazvo nzira idzi mbiri dzakabudisa zvakaenzana zvakafanana munyaya iyi, kusvika kwaBromumenstock nevamwe vaifambidzana kwaive kanenge ka10 nekukurumidza uye makumi mashanu inodhura kupfuura yeDemographic and Health Surveys. Izvi zvinodhura zvinokurumidza uye zvishoma kudhura zvinokonzera mikana mitsva kune vatsvakurudzi, hurumende, uye makambani (Blumenstock, Cadamuro, and On 2015) .
Ichi chidzidzo chakafanana neRorschach inkblot test: izvo vanhu vanoona zvichienderana nemamiriro avo ezvinhu. Masayendisiti akawanda emagariro evanhu anoona shanduro itsva yezviyero inogona kushandiswa kuongorora maonero pamusoro pekusimudzira hupfumi. Masayendisiti akawanda e data anoona chinotonhora chinodzidza mamiriro ekudzidza. Vanhu vazhinji vebhizimisi vanoona nzira yakasimba yekuzarura kukosha munhau huru iyo yave vatotora. Zvakawanda zvekuchengetedzwa kwehupfumi zvinokurudzira kuona chiyeuchidzo chinotyisa chokuti tinorarama munguva yekufungidzirwa kwevanhu vakawanda. Uye pakupedzisira, vazhinji vanoita mitemo vanoona nzira iyo teknolojia itsva inogona kubatsira kusika nyika iri nani. Ichokwadi, ichi chidzidzo ndechimwe chezvinhu izvi, uye nokuti ine izvi zvinosanganiswa, ndinozviona sehwindo mune ramangwana rekutsvakurudza kwevanhu.